အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ ပထမဆုံးသားကောင်မှာ မွတ်စလင်များသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်နှင့် မွတ်စလင်များကို ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဟု ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ တော့ စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်ဖို့ ဝေးသေးသည်… ညီညာပြီး စစ်မျက်နှာစုံဖွင့်၍ ဘက်စုံဝိုင်းတိုက်မှ စစ်ကျွန်ဘက လွတ်မည်
How did Myanmar President Thein Sein con the world? »
အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ ပထမဆုံးသားကောင်မှာ မွတ်စလင်များသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်နှင့် မွတ်စလင်များကို ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဟု ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
– ဘာသာသာသနာအား အကာအကွယ်ယူကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်နေကြသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ပထမဆုံး သားကောင်များမှာ မွတ်စလင်များသာဖြစ်သည်ဟု ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လော့ရင့် ဖာဘီယက်စ်က ပြောကြားလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်ဝါကို နှိမ်နင်းရန်အတွက်လည်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအား တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
“ဘာသာတရားရဲ့အမည်နာမအောက်မှာ တိုက်တာခိုက်တာမျိုး ဘယ်သူမှ မလုပ်ရပါဘူး။ မွတ်စလင်တွေဟာ ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ပထမဆုံးသားကောင်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု ကူဝိတ်သို့အလည်အပတ်
ရောက်ရှိနေသည့် ဖာဘီယက်စ်က ဂျာနယ်လစ်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အစွန်းရောက်ဝါဒအား တိုက်ဖျက်ရေး နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ထိုတိုက်ဖျက်မှုမှာ အောင်နိုင်ရမည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကူဝိတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှိခ် ဆာဘဟ် ခါလစ်ဒ် အလ်-ဆာဘဟ်ကမူ ကူဝိတ်နှင့် ပြင်သစ်တို့မှာ အကြမ်ဖက်ဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ တူညီသော အမြင်ရှိပြီး မိမိတို့ကလည်း ပြစ်သစ်ဂျာနယ်တိုက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အကြမ်းဖက်ဝါဒမှာ မိမိုတို့အားလုံးအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်ဟု ဆာဘဟ်က သတိပေးခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ ငွေကြေးရနေမှုနှင့် လူသစ်စုဆောင်းနေမှုများကို တားမြစ်ရမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဖာဘီယက်စ်က ပြင်သစ်အနေဖြင့် အစ္စလာမ်အား အလတ်အလတ်အယူဝါဒအဖြစ် ရှုမြင်ပြီး အစ္စလာမ်နှင့်
မွတ်စလင်တို့အား ဆန့်ကျင်သော လုပ်ရပ်များကိုလည်း ဥပဒေအတိုင်း တိတိကျကျ အရေးယူသွားမည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပဲရစ်ရှိ မဂ္ဂဇင်းတိုက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ပြင်သစ်ရှိ မွတ်စလင်များမှာ နှောက်ယှက်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး အဆိုပါအဖြစ်အပျက် ၁၀၀ ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟု အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါ စောင့်ကြည့်ရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် မွတ်စလင်ဖခင်တစ်ဦးမှာ အိမ်နီးချင်း၏ သတ်ဖြတ်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး မဂ္ဂဇင်းတိုက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက် လက်စားချေခြင်းဖြစ်သည်ဟု
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြင်သစ်ရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များမှာလည်း တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ကြုံတွေခဲ့ရသည်။
အစ္စလာမ်၏ သွန်သင်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် မဂ္ဂဇင်းတိုက် တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မွတ်စလင်ပညာရှင်များနှင့် အသင်းအဖွဲ့များက ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ပဲရစ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်လမ်းလျှောက်မှုတွင်လည်း မွတ်စလင်နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
This entry was posted on January 29, 2015 at 11:19 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.